Wednesday July 15, 2020 - 19:10:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khilaaf hor leh ayaa soo kala dhaxgalay hoggaanka dowladda Federaalka oo ku saabsan qaabka loo wajahayo doorashooyinka murunka badan dhaliyay.
Markii ugu horraysay guddoomiyaha Baarlamaanka Max'med Mursal ayaa ka hadlay shirkii Dhuusamareeb uga furmay hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo Xasan Kheyre.
Max'med Mursal oo warbaahinta Afka Soomaalida ku hadasha lahadlay ayaa sharci darro ku tilmaamay in madaxda maamul goboleedyadu ay ka hadlaan qaabka doorasho ee dalka ka dhici karta.
"Ma jirto meel ay sharciga uga qoran tahay in waqtigan la galo doorasho dadban. Dhammaan shuruucda la xiriirta doorashada waxay go'aannadooda u yaallaan golaha Shacabka. Maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka wax saameyn ah kuma laha arrintaas," ayuu yiri Mursal.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu aad udhaliilay tagitaankii Xasan Cali Kheyre ee Dhuusamareeb wuxuuna ka digay in meel looga dhaco wax uu ugu yeeray dastuurka qaranka.
"Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cawad matalaad uu matalayo Golaha Shacabka kuma aadin magaalada Dhuusamareeb, arrintaas fajac ayay nagu noqotay markii aan aragnay sawirada isaga oo la socda Ra’isal Wasaaraha, saaxibkeen Mahad Cawad danihiisa ayuu u aaday Dhuusamareeb ee anaga nama matalo, guddoon daba socda Xukuumadda wa ceeb” sidaas waxaa markale yiri Mursal.
Hadalka kasoo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka DF-ka ayaa umuuqda mid waafaqsan mowqifka Max'med Cabdullaahi Farmaajo ee ka dhanka ah in maamul goboleedyadu ay go'aamiyaan xilliga doorashadu dhacayso.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in xafiiska R/wasaaraha uu wax lawado hoggaamiyaasha maamul goboleedyda halka xafiisyada guddoomiyaha baarlamaanka iyo Farmaajo ay aad udiidanyihiin in madaxda maamullada ay saameyn weyn ku yeeshaan doorashooyinka laqaban qaabinayo.
Khamiistii lasoo dhaafay ayay Farmaajo iyo Kheyre siyaabo is khilaafsan uga hadleen arrinta muddo kororsiga xilli loo diyaar garoobayay shirkii Dhuusamareeb
Shirkii Dhuusamareeb oo soo gaba gaboobay iyadoo aan laysku raacin nuuca doorasho ee dhici doonta.